Himalaya Dainik » मोटाइन् कि गर्भवती छिन् प्रियंका ? सार्वजनिक भए यस्ता तस्बिर
मोटाइन् कि गर्भवती छिन् प्रियंका ? सार्वजनिक भए यस्ता तस्बिर
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको सोसल मिडियामा प्रकाशित भएका पछिल्ला तस्बिर चर्चामा आएको छ । तस्बिरमा प्रियंका लण्डनमा घुमिरहेको देखिएकी छिन् । वास्तवमा प्रियंका चोपडा यी तस्बिरमा केही मोटाएको जस्तो देखिएकी छिन् ।
तसर्थ उनका केही प्रशंसकले उनी गर्भवती भएकी हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, प्रियंका चोपडा यतिबेला क्याजुअल लुकमा देखिएकी छिन् ।
स्मरण रहोस्, प्रियंका चोपडाको किताब अनफिनिस्ड हालै रिलिज भएको छ । उनी आफ्नो किताबका लागि निकै चर्चामा छिन् । प्रियंकाले आफ्नो यो किताबमा आफ्नो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको यात्रा सबिस्तार वर्णन गरेकी छिन् । उक्त किताबमा प्रियंकाले आफ्ना थुप्रै रोचक किस्सा पनि साझा गरेकी छिन् । हाल प्रियंका लण्डनमा छिन्, जहाँ उनी आफ्नो वेब शो सिटाडेलको सुटिङ गरिरहेकी छिन् ।
प्रियंकाका प्रवक्ताले यसबारे मेल अनलाइनलाई भनेका छन्, ‘सरकारले तोकेको मापदण्ड अपनाएरै प्रियंका चोपडा जोनसको कपालमा रंग लगाउन हामी जोस उडमा आएका हौं। यो उनको नयाँ फिल्मका लागि हो।’ प्रवक्ताका अनुसार, सलुन निजी प्रयोजनका लागि खुलाइएको थियो।
त्यहाँ उपस्थित सबैको कोभिड परीक्षण पनि गराइएको थियो भने फिल्म प्रोडक्सन टोलीले मापदण्ड अपनाएर काम गरिरहेका थिए। फिल्म लन्डनका अनुसार, अहिले सरकारले तोकेको मापदण्ड अपनाउँदै बेलायती राजधानी र केही स्थानमा फिल्म छायांकन गर्ने अनुमति दिइएको छ।